Ny fomban'ny fahavaratra: fotoana hanaisanao ny kilaoty fohy avy ao amin'ny efi-tranonao | Bezzia
Ny fomban'ny fahavaratra: fotoana hanesorana ny pataloha fohy anao avy ao amin'ny arimoara
Maria vazquez | 07/06/2021 10:00 | Inona no hotafiko
Ny zava-drehetra dia manondro fa amin'ity herinandro ity isika dia afaka mankafy fotoam-pahavaratra, na dia tsy hiditra amin'ity vanim-potoana ity aza isika amin'ny 21 Jona ho avy izao. Fotoana fanesorana, noho izany, ny kilaoty fohy na kalisaona fohy, hamoronana fomba tahaka ireo zarainay anio.
Ny fohy dia a akanjo mifandraika amin'ny fahavaratra, na dia misy koa ireo manao azy amin'ny ririnina. Akanjo lavorary hankafizanao ny andro mafana indrindra ampiarahina amin'ny lobaka, blouse na lobaka ary kapa na lobaka. Te hahafantatra ny fomba anaovan'izy ireo izany ve ianao?
Toy ny mahazatra, isaky ny alatsinainy dia nampiasainay ny kaonty instagrammers lamaody isan-karazany hizarana fijery sivy aminao. Akanjo fahavaratra sivy miaraka amina anarana iraisana tokana: samy manana ny fehin'izy ireo na ny short.
Afaka mankasitraka fironana samihafa isika raha miresaka an'io karazana pataloha io. Denim shorts dia mbola iray amin'ny malaza indrindra rehefa tonga ny fahavaratra, na izany aza, amin'ity taona ity ny pataloha fohy avo vita amin'ny lamba maivana toy ny rongony. Ny tsara indrindra, tsy isalasalana, hiatrehana ireo andro mafana indrindra.
Raha mijery ireo safidy samihafa hanambarana azy ireo isika dia tsy maintsy miresaka fironana roa ihany koa. Ny voalohany, amin'ny aingam-panahy minimalista, dia manasa antsika hanambatra azy ireo T-shirt fototra na lobaka fotsy na mainty ary hamita ny endrika amin'ny kapa na t-shirt fisaka mba hampiononana bebe kokoa.
Ny fironana faharoa dia mamporisika antsika hanambatra short miaraka lobaka na blouse aingam-panahy avy amin'ny boho. Izy ireo dia mety ho lobaka misy pirinty voninkazo sy / na misy antsipirihany lamaody toy ny dantelina, ruffles na lava vita amin'ny volony. Mba hamenoana ny bika aman'endrinao dia tsy mila kapa fotsiny ianao na ambany na ombelahin-tongony, ireo izay ahazoanao aina indrindra sy kojakoja raffia.
Matetika no manao pataloha fohy amin'ny fahavaratra? Sa aleonao manao zipo na akanjo rehefa te hiala fohy?
Sary - @whaelse, @bartabacmode, @adelinerbr, @tsangtastic, @ fleuron.paris, @collagev waina, @lionseb, @auroraartacho
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Ny fomban'ny fahavaratra: fotoana hanesorana ny pataloha fohy anao avy ao amin'ny arimoara
Ahoana no hifehezana ny fanahiana momba ny sakafo
Ahoana ny fanaovana balsama molotra